फेसबुकमा भिडियो हाल्दा पैसा पाइने ! | EuropeNepal.Net
फेसबुकमा भिडियो हाल्दा पैसा पाइने !
00Europe Nepal Friday, July 3, 2015
फेसबुकमा भिडियो हाल्न रुचाउनेहरुको लागि फेसबुकले खुशीको खबर लयाएको छ। फेसबुकमा आफ्नो मौलिक भिडियो राखेवापत फेसबुकले पैसा दिने भएको छ। फेसबुकको नयाँ सजेस्टेड भिडियो फिचरबाट यो सम्भव हुने भएको हो। यो कुरा बिबिसिको हिन्दी संस्करणको वेबपेजमा उल्लेख गरिएको छ।
EuropeNepal.Net: फेसबुकमा भिडियो हाल्दा पैसा पाइने !